ဖတ်မိသမျှ သတင်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးဖြစ်ထင်တဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ခွင့်ပြုပါ – TodayZ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ….. ဒီနေ့တော့ ဖတ်မိသမျှသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါရစေ…ကျနော်ဖတ်မိသမျှ သတင်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးဖြစ်ထင်တဲ့ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျာ..
ပထမဆုံးအရေးကြီးသတင်းတပုဒ်အနေနဲ့ မြန်မာက တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ကုန်သွယ်မူတိုးမြင့်လိုက်တဲ့သတင်းကအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ် .. မြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့ အစိုးရရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှူတခုပါပဲ…. သတင်းအကျ ဉ်းက ဒီလိုပါ…
မြန်မာ – တောင်ကုိုရီးယား နှစ်နုိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှုတုိုးမြှင့်ရေးအ တွက် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးနှင့် ကုိုရီးယား- မြန်မာ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းတွင် ကုိုရီးယား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပုိုမုိုရင်းနှီး မြှုပ်နှံလာစေရန် သမ္မတမွန်က တုိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်….
တောင်ကုိုရီးယားဟာ မြန်မာနုိုင်ငံ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အတွက် ကျောင်းကားအစီး ၆၀ ကုို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး မြန်မာ အစုိုးရက တောင်ကုိုရီးယားခရီး သွားများအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ် ခွင့် သက်တမ်းတစ်နှစ် တုိုးမြှင့် ကြောင်း မြန်မာခရီးစဉ်အတွင်း ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်….
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတခရီးစဉ်အတွင်း ကိုရီးယားအစိုးရပိုင် LH ကော်ပိုရေးရှင်း၏ ဒလမြို့သစ် စီမံကိန်းနှင့် မြေဧက ၅၀၀ ကျော်ရှိ စက်မှုဇုန်စီမံကိန်း အပါအ၀င် မြန်မာ- တောင်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံကြား စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာငါးခု လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ… ဒါက မြန်မာစီးပွားရေးအခွင့်လမ်းအတွက် အားရစရာကောင်းပါတယ်…
ဆက်လက်ပြီး ပညာရေး၊ စက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ ခရီးသွားကဏ္ဍ မြှင့်တင်ရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံပုိုင်း ဆုိုင်ရာ၊ နည်းပညာနှင့် ငွေကြေးဆုိုင်ရာအကူအညီပေးရေး စသည်တုို့နှင့်သက်ဆုိုင်သော နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MoU) ခြောက်ခုကုို မြန်မာ-ကုိုရီးယားခေါင်းဆာင် နှစ်ဦးရှေ့မှောက်တွင် လက်မှတ် ရေးထုိုးလဲလှယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်…
အစိုးရနှစ်ခုကြား သဘောတူညီမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရီးယား ပထမဦးဆုံး စက်မှုဇုန်ဖြစ်မည့် ကိုရီးယား-မြန်မာစက်မှုဇုန် စီမံကိန်း(KMIC)ကို လက်မှတ်ရေးထိုးသည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်….
ထိုစီမံကိန်းသည် အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါဝင်ပြီး ပထမအပိုင်းကို ၂၀၁၉ တွင် စတင်ပြီး ၂၀၂၂ ၌ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပါတယ်..
ဒုတိယအပိုင်းကို ၂၀၂၀ တွင် စတင်ပြီး ၂၀၂၃ ၌ ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုစီမံကိန်းကို ကိုရီးယားအစိုးရပိုင် Land and Housing ကော်ပိုရေးရှင်း(LH)နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ဒါအပြင် ကိုရီးယား KB Kook-min ဘဏ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ တို့ကြား အိမ်ရာဆိုင်ရာ တည် ဆောက်ရေးချေးငွေကို သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်.. ထိုချေးငွေသည် ၀င်ငွေနည်းပြည်သူများ အိမ်ရာ ဆောက်လုပ်ရန် ဖြစ် တယ်.. ပြည်တွင်းရှိ အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများ ထောက်ပံ့ရန် ပြည်တွင်းရှိ SME ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်နှင့် ကိုရီးယားစက်မှုဘဏ် တို့ကြား နားလည်မှု စာချွန်လွှာ ရေးထိုးခဲ့တာပါ..
ခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုသုံးသပ်ရရင် မြန်မာ့ စီးပွားရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုရီးယားက အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ ယေဘုယအနေနဲ့ သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ..
ရန်ကုန်လိုင်စင်ပြန်ဖွင့် ရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (ကြီး/ ကော်)က နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (NECC)သို့ တင်ပြထားသည်ဟု စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက် အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်က ပြောထားပါတယ်…
သုံးနှစ်ကျော်ကြာ ပိတ်ထား သည့် ရန်ကုန်လိုင်စင်ပြန်ဖွင့်ရန် ကြီးကော်က မူအားဖြင့် သဘော တူသော်လည်း NECC က အပြီး သတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမည် ဖြစ် ပါတယ်..
ရန်ကုန်လိုင်စင်ပေးမည့် အစီးရေကို ကြီးကော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကြား ဆွေးနွေးနေပြီး စီမံချက်စတင်နိုင်သည့် နှစ်တွင် ရန်ကုန်လိပ်စာပြောင်း မည့် နယ်လိုင်စင်ယာဉ်များ ခွင့်ပြုဦးမည်မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရအ ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ပြောထားတာကိုဖတ်မိပါတယ်ခင်ဗျာ..
ပြည်တွင်းရွှေဈေးတည်ငြိမ်စေရန် လက်ထဲတွင် ရွှေနှင့်ငွေရှိမှသာ တိုက်ရိုက်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန် ပွဲစားများနှင့်ဝယ်ရောင်းများကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက အသိပေးပါတယ်..
စက်တင်ဘာ ၃ ရက်ကစ၍ ရွှေဈေးဆက်တိုက်မြင့်တက်လာ ခြင်းသည် ပြည်တွင်းဘဏ်များမှ ငွေထုတ်ပြီး ရွှေဝယ်ယူလာကြ ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ရွှေဈေးမြင့်တက်ခြင်း၊ မူဆယ်−မန္တလေးပြည်ထောင်စုလမ်း ပိတ်နေခြင်း ကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံမှ တရားမဝင်ရွှေများ အဝင်နည်းပြီး ဈေးကွက် အတွင်း ရွှေရှားခြင်းကြောင့်ဖြစ် ကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ က အ သင်းဝင်တို့က ပြောထားတာကိုဖတ်ရပါတယ်..
အစည်းအဝေးတွင် အချက် ငါးချက်ကို သဘောတူညီခဲ့ပြီး ‘ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အသုံးအ နှုန်းဖြစ်သော’ ရွှေထိ၊ ငွေထိ၊ ရွှေမြန်၊ ငွေမြန် ရောင်းချရန်၊ ကြို ရောင်းကြိုဝယ်များ မပြုလုပ်ရန်၊ အသင်းဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်း အောင် မပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြုလုပ်ပါ က အသင်းမှ ထုတ်ပယ်မည်ဟု အသိပေးခဲ့တာကတော့ မင်္ဂလာသတင်းပါပဲ…
နောက်ဆက်လက်ပြီး ကလေးလေးဗစ်တိုးရီးယားအမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်စပ်သတင်းလေး ၀မ်းနည်းစရာသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပါရစေ..
ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကို ခုံရုံးဖွဲ့၍ ကိုင်တွယ်စစ်ဆေး နေသည့် တရားသူကြီးနှစ်ဦးအ နက် အသက် (၅၁)နှစ်အရွယ် ဒက္ခိဏခရိုင် ဒုတိယတရားသူကြီး ဦးညိုဌေးသည် ဦးနှောက်သွေး ကြောပေါက်သဖြင့် ယမန်နေ့တွင် မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်.
ဦးညိုဌေးသည် ယခင်က တည်းက ကျောက်ကပ်ရောဂါဖြင့် မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်.. စက် တင်ဘာ ၃ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ၌ ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ပြီး ၄ ရက် နံနက်က ကွယ်လွန်ခဲ့ ကြောင်း နီးစပ်သူများက ပြော သည်။ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကို ဒက္ခိ ဏခရိုင် တရားသူကြီး ဦးတင့် လွင်က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူ၍ ဦးညိုဌေးက အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စစ် ဆေးနေတာပါ..
ဦးညိုဌေးသည် ဗစ်တိုးရီး ယားအမှု လေးကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအထိသာ တရားခွင်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ သည်။ ထို့နောက် ဩဂုတ် ၂၈ ရက် ငါးကြိမ်မြောက် ရုံးချိန်းတွင် မူ ဦးညိုဌေး ကျန်းမာရေးအရ ခွင့်ယူထား၍ တရားသူကြီး ဒေါ်သီတာနွယ်က ပြောင်းလဲစစ်ဆေးခဲ့ ပါတယ်…
ဦးညိုဌေးသည် ဗစ်တိုးရီး ယားအမှုကို ပြည်သူများ စိတ်ချမ်း သာရမည်ဖြစ်ပြီး မှန်ကန်တိကျရ မည်ဟု အာမခံပြောကြားထား ပါတယ်… ထို့အပြင် သမာသမတ် ရှိပြီး ပွင့်လင်းရိုးသားသူဖြစ်သည် ဟု ရှေ့နေအသိုင်းအဝိုင်းတွင် ကြားသိရကြောင်း ပစ်တိုးရီးယား အမှု စွပ်စွဲခံရသူ အောင်ကြီး၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က မှတ် ချက်ပြုထားပါတယ်…
။ဦးညိုဌေး၏ ဖခင်နှင့် ဇနီးတို့လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဩဂုတ်အတွင်း ကပင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်..ဖတ်မိသမျှသတင်းတွေထဲမှာတော့ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..
ခုဆက်လက်ဖော်ပြသတင်းတွေက ကမာသတင်းတွေပါ၊ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို မီးမောင်းထိုးပါရစေ..ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီကရတဲ့ သတင်းတပုဒ်ပါ..
အသက် (၂၁)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် ပြင်သစ် နိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်အတွင်း အ သတ်ခံရသော ၁၀၀ ဦးမြောက် အမျိုးသမီး ဖြစ်လာပြီးနောက် ပြင်သစ်အစိုးရက အိမ်တွင်း အ ကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်စပ်သော အမျိုးသမီးများ အသတ်ခံရမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်များကို ကြေညာထားပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဘူတာရုံတစ်ခုအနီး၌ လမ်းသွား လမ်းလာတစ်ဦးက ခြေထောက် အပိုင်းအစတွေ့သည်ဟု ထင်မြင် ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို အကြောင်းကြား ပြီးနောက် ဆာလိုမီ (၂၁) နှစ် အသတ်ခံရမှုကို သိရှိခြင်းဖြစ် ပါတယ်။
ယင်းအမျိုးသမီးငယ်သည် အတူနေသူ အမျိုးသား၏ သတ် ဖြတ်မှုခံရပြီး ယခုအခါ ၎င်းကို ဖမ်းဆီးထားကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးများ အသတ်ခံရမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဘတ်ဂျက် ယူရိုငါးသန်း ထုတ်ပေးရေး နှင့် တိုင်ကြားမှုများကို ပိုမိုလွယ် ကူအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့်အတူ ခြိမ်းခြောက် ခံရသော အမျိုးသမီးများကို အကာအကွယ်ပေးရေး တိုးတက် အောင် လုပ်ဆောင်ရန်၊ လက်တွဲ ဖော်များကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားရေးအစီအစဉ်များကို ဝန်ကြီးချုပ်က ဖော်ပြထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးသတင်းကိုတော့ ကမာစီးပွားရေးအရေးပါတဲ့ အမေရိကန် တရုတ်ကုန်သွယ်ရေး ပဋိပက္ခ အခြေအနေတွေကို ဖော်ပြပေးပါရစေ..၊
အမေရိကန်နှင့် ကုန် သွယ်ရေးပဋိပက္ခတွင် ကြားဝင် ဖြေရှင်းရန် တရုတ်က ကမ္ဘာ့ကုန် သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO)ကို တောင်းဆိုပြီး ယခုသီတင်းပတ်၌ စတင် အသက်ဝင်လာမည့် အမေရိကန် အခွန်သစ်များကို ဆန့်ကျင်၍ WTO တွင် တရားစွဲပါတယ်၊
ဖိနပ်များ၊ အဝတ်အစားနှင့် အထည်အလိပ်များအပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်း ကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဘီလီယံဖိုးအပေါ် အမေရိကန်က ယခုသီတင်းပတ် အတွင်း အခွန် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ချမှတ်တယ်၊
WTO ၏ အငြင်းပွားမှု ဖြေ ရှင်းရေး ယန္တရားမှတစ်ဆင့် တရားစွဲဆိုမှုသည် တရုတ်အား ၎င်းတို့ ၏ တရားဝင် အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခွင့် ရရှိစေပါတယ်၊
တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်း ကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀၀ ဖိုးအ ပေါ် ပထမအသုတ်အဖြစ် အမေ ရိကန်၏ အခွန်ချမှတ်မှု စက်တင် ဘာ ၁ ရက်က စတင်အကောင် အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်း မှာ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာမြို့၌ တွေ့ ဆုံစဉ် သဘောတူညီချက်နှင့် ဆန့် ကျင်နေကြောင်း၊ ယင်းကို တရုတ်နိုင်ငံက ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင် ကြောင်း WTO သို့ တိုင်ကြား ချက်တွင် တရုတ်က ဖော်ပြထားပါတယ်၊
အမေရိကန်၏ ယခင်အခွန် ချမှတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်က အလားတူ WTO သို့ တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်၊
အမေရိကန်က ဖြေရှင်းချက် ပေးရန် ရက် ၆၀ အချိန်ရပြီး သို့မဟုတ်ပါက WTO အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံကို အသာပေးနိုင် သည်။ သို့သော် ယခင်က အလား တူ စိန်ခေါ်မှုများကဲ့သို့ပင် ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့က ကိုင်တွယ် အရေးယူဖွယ်မရှိဟု ကျွမ်းကျင် သူများက ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ..
ခုလိုဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ဆက်လက်ပြီးခုအစီအစဉ်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ ၀က်ဆိုက်ကိုလည်း ၀င်ကြည့်နေဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်၊